जोर्डि सिएरा आई फबरा: पुस्तकहरू जुन हामी तपाईंलाई पढ्न सिफारिस गर्छौं वर्तमान साहित्य
जोर्डी सिएरा आई फबरा: पुस्तकहरू जुन हामी सिफारिस गर्छौं
निस्सन्देह, सबैभन्दा प्रशंसनीय र सक्रिय स्पेनिश लेखकहरूमध्ये एक हो जोर्डि सिएरा आई फेब्रा, जसले आफू सानो छँदादेखि 500०० भन्दा बढी लेखहरू लेख्नुभयो। वास्तवमा, त्यहाँ सबै स्वादका लागि जोर्डी सियरा आई फेब्रा द्वारा पुस्तकहरू छन्, र तिनीहरू मध्ये धेरै स्कूल वा संस्थानहरूमा पाठ कार्य वा टिप्पणी गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तर, जोर्डि सिएरा आई फब्रा को हो? तपाईले कुन पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ? किन यति धेरै परिचित छ? हामी तल ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छौं।
1 जोर्डी सिएरा म Fabra को हो
2 जोर्डि सिएरा आई फब्रा: उनका पुस्तकहरू
2.1 स्ट्रबेरी क्षेत्रहरू
2.2 गणित शिक्षकको हत्या
2.3 जोर्डी सियरा आई फब्रा पुस्तकहरू: काफ्का र यात्रा पुतल
2.4 मेरो (पहिलो) books०० पुस्तकहरू: जोर्डी सिएरा आई फबराको साहित्यिक संस्मरणहरू
2.5 जोर्डि सिएरा आई फब्रा पुस्तकहरू: खाली किताबहरूको पुस्तकालय
2.6 जोर्डि सिएरा आई फब्रा पुस्तकहरू: स्मृतिको छाला
जोर्डी सिएरा म Fabra को हो
जोर्डी सिएरा आई फबरा एक पवित्र अभिबृद्धि स्पेनिश लेखक हुन्। उहाँ १ 1947। XNUMX मा बार्सिलोनामा जन्मनुभएको थियो र उनले विभिन्न साहित्य विधाहरू लेखेका छन्, जस्तै उपन्यास, कविता, निबन्ध वा छोटो कथाहरू। जे होस्, यो बाल र युवा साहित्यमा छ जहाँ उसले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलताहरू प्राप्त गर्‍यो।
धेरै जसो लेखकका बारे नजान्ने कुरा के हो भने उनी पप स about्गीतको बारेमा पनि भावुक हुन्छन् भन्ने कुरालाई उनले पत्रिका र रेडियो स्टेशनहरूको लागि काम गरिरहेको थियो। निस्सन्देह, उनले यसलाई लेखकको रूपमा आफ्नो कामसँग पूर्ण रूपमा जोडे।
आज जोर्डी सिएरा आई फबरा स्पेनमा मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिकामा पनि चिनिन्छ। र उनको जीवन भन्न को लागी "गुलाबी" छैन।
लेखकको बच्चाको रूपमा धेरै समस्याहरू थिए किनकि ऊ एक stutterer थियो र यसको मतलब आफ्ना सहपाठीहरू धेरै उसलाई लिइरहेका थिए। उनको परिवारमा पनि त्यस्तै भयो। तसर्थ, उनले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पुस्तकहरूमा केन्द्रित गरे र बाध्यकारी पाठक थिए।
आठ वर्षको उमेरमा उनी गम्भीर दुर्घटनामा परे र १० देखि १२ वर्षको उमेरदेखि उनले पहिलो कथाहरू लेख्न थाले। लगभग सबैलाई लगभग एक सय पृष्ठहरू भएको द्वारा चित्रित गरिएको थियो, जबकि १ 10 मा उसले 12०० पृष्ठहरू मध्ये एक समाप्त गर्न सफल भए।
बुबाको दायित्वले गर्दा उहाँ कठोर बन्न पढ्नुभयो, यद्यपि उनलाई मनपर्ने कुरा संगीत लेख्नु र सुन्नु थियो। २१ बर्षको उमेरमा, सार्वजनिक आदेश अदालतले उनलाई हस्ताक्षर गर्‍यो किनकि ऊ एक छुट्टै पत्रिकामा लेख्दै थियो र त्यसले उनको राहदानी फिर्ता लिन निम्त्यायो।
धेरै जिद्दी पछि, सन् १ 1968 .XNUMX मा एक पत्रिका सम्पादकको रूपमा काम पायो। यद्यपि यो त्यहाँ रोकिएन; उनले ला Prensa डे बार्सिलोना र न्यूभो डिआरियो डे माद्रिदमा लेख लेख्न समय बनाए। उनले साप्ताहिक डिस्को एक्सप्रेस (जुन years बर्षसम्म चलेको) मा निर्देशकको रूपमा पनि भाग लिएका थिए र उनको पहिलो पुस्तक १ his 8२ मा एक संगीत थियो। यो १ 1972 1962२-72२ को पप संगीतको इतिहास थियो।
उहाँ संगीत उद्योगमा यती राम्रोसँग चिनिनुहुन्थ्यो कि केही उत्तम संगीत म्यागजिनहरू उनको टोलीमा थिए: शीर्ष पत्रिका, थप, लोकप्रिय १, सुपर पप ...
यस पुस्तक बाहेक (र अरू धेरै आएका) कथा र निबन्धमा उनले १ 1975 1981 मा द वर्ल्ड अफ गोल्डेन र्याट्सको साथ प्रिमियर गरे; जबकि युवा साहित्यहरू १ XNUMX XNUMX१ सम्म एल काजाडोरसँग आउँदैनन्।
जोर्डि सिएरा आई फब्रा: उनका पुस्तकहरू
जोर्डि सिएरा आई फेब्राले लेखेका सबै पुस्तकहरू बारे तपाईसँग कुरा गर्ने क्रममा असम्भव कार्य हुन सक्छ। र यो यसको श्रेय हो कि उहाँ 500०० भन्दा बढी पुस्तकहरूको लेखक हुनुहुन्छ, जसको साथ हामीले यति विस्तृत सूचीको कारण तिनीहरू प्रत्येकमा टिप्पणी दिन सकेनौं।
यद्यपि हामी गर्न सक्दछौं हामी के विचार गर्छौं त्यसको चयन लेखकका सर्वश्रेष्ठ पुस्तकहरू हुन्। हो, धेरै संग, यो सबै कभर गर्न वा एक उद्देश्य छनौट गर्न असम्भव छ, केहि कम वा कम अन्य पुस्तकहरु जस्तै हुनेछ। तर हाम्रो मामला मा, हामीले निम्न छनौट गरेका छौं:
लुसियाना s ० को दशककी एउटी युवती थिइन् जो ड्रमाको संसारले घेरिएकी छिन्, जबसम्म उनी कोमामा नपरुन्न्। यसैले, लेखकले के कामको साथ प्रयास गर्दछ युवा मानिसहरूलाई मद्दत गर्न के राम्रो छ र के छैन, के राम्रो छ र के समाजमा खराब छ भनेर बुझ्नुहोस्।
गणित शिक्षकको हत्या
कसले आफ्नो गणित शिक्षक कहिले मार्न चाहँदैन थियो? यद्यपि जोर्डि सिएरा आई फेब्राले आफ्ना पुस्तकहरूमा नराम्रो कुरा गर्ने विचारहरू दिन खोज्दैन, हामी हास्यास्पद कथा पाउन सक्छौं।
यसमा तपाईले तीन विद्यार्थीहरू भेट्नुहुनेछ जो गणितमा नराम्रो छन्। त्यसो भए शिक्षकले उनीहरूलाई एक परिदृश्यको साथ प्रस्तुत गर्ने कोशिस गर्दछ जसमा तिनीहरू वास्तवमै समाधान गर्न चासो लिन चाहन्छन्: मर्दै।
यस कारणका लागि, उनले आफ्नो मृत्यु र आदेशहरू उठाउँछन्, नोट र संकेतका माध्यमबाट, मुद्दाको समाधान।
जोर्डी सियरा आई फब्रा पुस्तकहरू: काफ्का र यात्रा पुतल
यस अवस्थामा लेखकले काल्पकालाई एक ठूलो श्रद्धांजलि सिर्जना गर्न आफ्नो कल्पना प्रयोग गर्‍यो। र यसको लागि उनले यो कथा सिर्जना गरे जसमा यो बताइएको छ कि कसरी काफ्का पार्कमा रोइरहेकी एउटी केटीसँग पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उसले उनलाई के भयो सोध्यो र सानी केटीले उनलाई पुतली गुमाएको कुरा बताई।
त्यो केटी द्वारा उत्प्रेरित, उसले पार्कमा रहेको र आफ्नो "पुतली" बाट सन्देश पठाउने एक जवान मानिस "डल पोस्टम्यान" को चरित्र आविष्कार गर्ने निर्णय गरे।
यसप्रकार, जोर्डी सिएरा आई फेब्राले आफ्नो पुस्तकमा यस दृश्यको साथै "अक्षरहरू" पनि लेखेका थिए।
निस्सन्देह, हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि यो वास्तवमै भएको घटना होइन (केटीसँगको घटना बाहेक, जसको बारेमा आफ्नै विधवाले टिप्पणी गरेको छ)।
मेरो (पहिलो) books०० पुस्तकहरू: जोर्डी सिएरा आई फबराको साहित्यिक संस्मरणहरू
लेखकले यस पुस्तकमा उनका प्रथम पुस्तकहरूको शीर्षक संकलन गरेका छन, किन ती कारणले गर्दा उनलाई उनीहरू लेख्न प्रेरित भयो, साथै Anecdotes कि तपाइँ ती शुरुआती वर्षहरु बाट सम्झना।
जोर्डि सिएरा आई फब्रा पुस्तकहरू: खाली किताबहरूको पुस्तकालय
के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि पुस्तकालयमा पुस्तकका अक्षरहरू खस्न थाले? किनभने, बित्ता बिरुवा जस्तै, पुस्तकहरू मर्न सुरु हुनेछ? ठिकै छ यो जेर्डी सिएरा आई फेब्राले यस पुस्तकको साथ कल्पना गर्छ, यस्तो शहर जहाँ कोही पढ्ने छैन र अनौठो घटना घट्न थाल्छ। तर बिस्तारै उनीहरूले अझ महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउँनेछन्।
जोर्डि सिएरा आई फब्रा पुस्तकहरू: स्मृतिको छाला
यो नाटक हो जसमा उनले हामीलाई एक युवा अफ्रिकी पात्रको परिचय दिन्छन् जसले आफ्नी आमा गुमाएका छन्। यद्यपि उनका बुबा उनीसँग बस्नुहुन्न, तर आर्थिक समस्या समाधान गर्न बेच्ने निर्णय गर्नुहुन्छ।
तसर्थ, पुस्तक मा तपाईं सक्नुहुन्छ कठिनाईहरूको अनुभव गर्नुहोस् जुन यी युवाले अफ्रिकी र गरिब भएको छ। केहि सन्देशहरू जुन गहिरोमा जान्छ र तपाइँलाई सोच्न लगाउँदछ, लेखकले के खोज्छन कान्छोलाई बुझाउनको लागि (किनकि यो किशोर साहित्यको पुस्तक हो) जुन जाति, छालाको रंग इत्यादिबाट न्याय गर्नुपर्दैन। (र अन्य सन्देशहरू जुन हामी तपाईंलाई सजग राख्नका लागि राख्छौं)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » जोर्डी सिएरा आई फबरा: पुस्तकहरू जुन हामी सिफारिस गर्छौं
म यस लेखकलाई माया गर्दछु। मैले यसलाई पत्ता लगाए जब मैले EL CARTERO de MU KECAS पढें, काफ्कालाई ठूलो श्रद्धांजलि सिर्जना गर्न, त्यसपछि मैले उनका युवा पुस्तकहरू पनि पढें, यद्यपि मैले 78 XNUMX बर्षको उमेर पाइसकेको छु।
सेनालाई जवाफ दिनुहोस्
लेटिसिया सिएरा। पशुको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
स्पेनिश ऐतिहासिक उपन्यास पुस्तकहरू